Daniel Bariisoo Areerii is live now: must listen!! Kichuu
HomeAfaan OromooVideosDaniel Bariisoo Areerii is live now: must listen!!
Daniel Bariisoo Areerii is live now: must listen!!
Nageenyi bu’uura waan hundaati
Dhiyeenya kana Magaalaa Asallaatti qaamoleen jijjiirama argame gufachiisuu barbaadan jeequmsa kaasaniin namoota muraasa irra miidhaan gahee ture. Ka’umsi jeequmsaa gidduu Magaalaa keessatti halluu Alaabaa ABO qeerroon dibuu eegale sababeeffachuun gareen muraasni alaabaa halluun isaa magariisa, keelloo fi diimaa (kan G7) ta’e qabatanii dhaadannoo adda addaa dhageessisuun bahaniin akka ta’e hubatamee jira.
Rakkoo amantaa fakkeessuuf jecha naannawa manneen amantaatti dhaadannoo adda addaa ageessisaa kan turan ta’us, rakkichi amantaan kan Wal hin qabanne ta’uu mirkanaa’ee jira.kanarraa ka’uun eerroo simannaa ABO tiif qophii taasisaa jiran waliin walitti bu’iinsi uumameera. ta’us qeerroon yeroof obsaan dabarsee jira. Gareen alaabaa G7 qabachuun socho’u kun iddoo adda addaatti gurmaa’uun namoota nagaa irratti miidhaa kan qaqqabsiise ta’uu odeeffannoo argannee jirra. Qeerroon muraasnis miira keessa galuun Magaalaa keessa socho’ee miidhaa geessuuf yaalus walgorsuudhaan akkasumas qaama nageenyaatiin bittannaa’ee jira
Yeroo ammaa kana magaalaan Asallaa nagaa qabdi, abbootiin amantaa, manguddoonnii fi bakka buutonni Qeerroo marii taasisuun tokkummaadhaan nageenya eegsisuuf akkasumas qaamolee jeequmsa uuman saaxiluuf waadaa galanii jiru.
Kabajamtoota hordoftoota fuula fb keenyaa ergaa Keenya irratti waan sirraa’uu qabu, odeeffannoo qabdanii fi Yaada bifa kamiinuu nuuf kennitan ni simanna.